Ny fifanarahana, nanome tsiny ny olana momba ny resaka pasipaoro - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Ny fifanarahana, nanome tsiny ny olana momba ny resaka pasipaoro
fa iray ihany koa ny orinasa tompony ny mizara
Fitsarana teo aloha avy amin'ny sekretera jeneralin'ny minisiteran'ny Raharaham-Bahiny (DFA) voalaza fa mampiahiahy ny fifanarahana tao ny fanaovana ny pasipaoro ny ankehitriny ny miadana ny dingana amin'ny famoahana azyNy banky foibe ao Filipina (BSP), ny teo aloha mahatonga ny pasipaoro indrindra fa tsy tafahoatra ny fiarovana ny filàna eto, ny fiarovana ho an'ny fanontam-pirinty ny vola. Saingy nanapa-kevitra avy eo nampiany hoe,"hanosika azy ho ny APO Famokarana Tarika Inc.
Na izany aza, dia nanambara teo aloha avy amin'ny Sekretera Perfecto Yasay, fa tsy ny PATRIARIKA ny holatry ny pasipaoro, nanolotra ny PATRIARIKA na natao mba subcontractors ao fanontam-pirinty mafy ny tsy miankina.
Mipetraka manta ny Yasay toy DFA ny sekretera dia,"fa ny fifanarahana ary nilaza izy fa ny Filoha Rodrigo Duterte mihitsy. Tsy te-hiatrika ny fakan-tsary, fa eo an-tsoratra ny valiny, Hoy i Michael Dalumpines, mpitari-draharaha sy ny manao ny TALE jeneralin'ny APO Famokarana Tarika Inc, ny orinasa mamoaka ny pasipaoro sy tsy United Sary Maneho hevitra Corp. Ny orinasa tsy miankina UGEC fotsiny hoy ny mpampiasa vola ary ny mpividy, ny fitaovana sy ny fitaovana eo amin'ny vita pirinty pasipaoro. Ny iray dia Coloma sonia ny fifanarahana ho an'ny fanontam-pirinty ny pasipaoro vaovao satria eo amin'ny farany ambany ny birao dia ZAFIKELIKO. Ny DADABE nanao pirinty azy Ny ny trano dia ho any amin'ny fiarovana ny fanontam-pirinty ny zava-maniry ny PATRIARIKA sy ny tsy fotsiny ny pasipaoro no manao. Mialoha ny pasipaoro elektronika afaka. 'yong fiarovana ny fanontam-pirinty ny vola miditra sy ny hajia, ani Coloma. Fa amin'ny, tatitra fa ny Vaomiera mikasika ny Hanaraha-maso (COA) izay naneho hevitra fa toa tsy ao amin'ny didy ny PATRIARIKA ny fifanarahana izy ireo maglilimbag ny pasipaoro.
Araka Yasay, izany dia fandikana ny lalàna
Ho dia Tanàna Voalohany Rep. Carlos Zarate vonona mba hanadihady ny raharaha, indrindra fa ny tatitra mbola nambabo ny fanomezana ny taratasy ny pasipaoro any Slovenia, firenena ao Eoropa. 'Tsy tonga saina isika dia fehezin'ny UGEC, ny tsy miankina ny fikambanana, satria misy ny mpiara-barotra fifanarahana, ny kokoa nakakalamang ny hitsiny ny UGEC. Noho izany ny hevitry rehetra sy ny tanjona, UGEC mihazona azy, ny tsy miankina ny fikambanana. Noho izany 'yan pa lang, ny saina mena 'izany hoe, ani Zarate. Fa antoka ihany koa dia nilaza fa afa-tsy ny fanomezana ny taratasy, ka tsy tokony omena tsiny misy hataka andro ao amin'ny famokarana ny pasipaoro.
Ny fiarovana avy amin'ny lalàna ho an'ny OFW
'Tuồn tiền đó ra khỏi Lừa đảo ở MỸ, pinambili của chiếc xe, tài sản'